Nhau - Maitiro Ekuyerera eHigh Frequency Welded Pipe Unit
Maitiro Ekuyerera eHigh Frequency Welded Pipe Unit
Yakakwira frequency welded pombi michina kunyanya ine uncoiler, yakatwasuka musoro muchina, inoshanda yekumisikidza muchina, sheari garo welder, yekuchengetera mhenyu ruoko, kugadzira sizing muchina, wemakomputa kubhururuka saha, azvikuya musoro muchina, hydraulic bvunzo muchina, donha roller, flaw yekuona michina, baler , yakakwira frequency DC dhonza, izere mutsara magetsi emagetsi, nezvimwewo Hunhu hweakakwira frequency welded pombi unit ndeiyi: yakakwira yekumhanyisa kumhanyisa, diki yekumisikidza kupisa yakakanganiswa nharaunda, kutenderera kune yekushandira hakugone kucheneswa, weldable yakatetepa pombi yemadziro, weldable simbi. pombi.
Yakakwira-frequency yakakosheswa pombi yeyuniti yekugadzira maitiro kunyanya kunoenderana nezvakasiyana zvigadzirwa, kubva pane zvakasvibirira kusvika kumagumo zvigadzirwa zvinofanirwa kuenda kuburikidza nhevedzano yemabatiro ekupedzisa maitiro aya anoda akasiyana michina nemidziyo uye nemoto, magetsi kutonga, kuyedza zvishandiso, izvi zvishandiso nemidziyo zvinoenderana neakasiyana maitiro anodikanwa ane akasiyana marongero akarongeka, yakakwira-frequency yakakomberedzwa pombi yakajairika maitiro: longitudinal shear - uncoiling - strip yekumisikidza - musoro uye muswe sheya - bhendi garo kutenderera - rarama ruoko ruoko chengetedzo - kuumba - Welding - burr kubviswa - sizing - kukanganisa kutadza - kubhururuka kucheka - kwekutanga kuongorora - pombi kutwasuka - pombi chikamu kugadzirisa - hydraulic bvunzo - kukanganisa kutadza - kudhinda uye kupfeka - zvigadzirwa zvakapedzwa.
Tora yekushongedza pombi yekudzora muchina semuenzaniso, iyo michina yekugadzira michina inonyanya kusanganisira zvinotevera zvinhu.
1. Kuisa: kuburikidza neyekutakura rack ichaiswa muhurongwa netambo yesimbi, kuburikidza nemagetsi emagetsi ekudhiraina simbi tambo kune iyo inogadzira chikamu, nzira yese yekuenderera.
2.Kugadzira chikamu: iro rakapetwa simbi tambo kuburikidza nemupumburu kufa extrusion kuumbwa, kutanga kweasina simbi pombi prototype.
Chikamu chekuchidzira: iwo maviri mativi esimbi simbi yakakungurutswa, kuburikidza nemuchina wekutemesa yakanyanya kupisa tembiricha, inozivikanwa seasina simbi pombi weld.
4. Kukuya chikamu: iyo yepamusoro tembiricha mamiriro yesimbi isina simbi chubhu kuburikidza nemvura inotonhora inotonhora, kukuya iyo isina simbi chubhu weld bump, kunatsiridza kugadzikana kweiyo weld seam.
5. Kucheka uye kururamisa: kutenderera kweiyo isina simbi chubhu yekutyaira degree neyakaipisa tembiricha yakakwira uye kutonhora kwemvura kunozove nekushomeka kudiki. Kuchekesa uye kutwasanudza kuburikidza neanotenderera, iko kwekupedzisira kutsunga kwekutenderera kana kukona kweiyo isina simbi pombi.
6.Kucheka chikamu: kuburikidza nesaha reza kucheka kana hydraulic kucheka, zvinoenderana nezvinodiwa chaizvo zvemushandisi pombi kureba akangwara kucheka pombi.
7. Cinder iwo maratidziro: ne pasi pechinhu imba, hapana kukuvara hapana kumanikidza kuisa semi-apedza zvigadzirwa.
8. Kukwenenzvera: zvigadzirwa zvakapetwa zvakapetwa zvinotakurirwa kumashini yesimbi isina simbi pombi yekumaka yeakapedza chigadzirwa pamusoro pekuputira mainjiniya kujekesa.
9.Kupaka: iyo inopenya chigadzirwa sekristaro yekushongedza chubhu kuburikidza nemuchina wekupakata kana bhuku remanyoro rekutakura.
Nzwisisa aya mapfumbamwe, nezve iyo isina simbi-simbi yekudzora chubhu michina yekugadzira michina haina dambudziko. Waini yakanaka haidi gwenzi, asiwo kushandisa nzira kwayo, pamwe nekutsvaga mugadziri akanaka kuti ave nega-on-one nhungamiro.